DAAWO SAWIRRO: Argooyin tira badan oo galabta ku qul-qulay Magaalada Dhuusamareeb | HalQaran.com
DAAWO SAWIRRO: Argooyin tira badan oo galabta ku qul-qulay Magaalada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud waxaa Sabtidii maanta gaaray xubno ka mid ah Ergooyinka loogu talagalay inay ka qaybgalaan shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha degga Galmudug.
Ergooyinka oo goobo kala duwan isaga kala yimid ayaa waxaa qaarkood lagu soo dhaweeyay Garoonka Dhuusamareeb, xubnihii ku soo dhaweeyayna waxaa horkacayay Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta shirweynaha beelaha Galmudug, C/raxmaan Macalin C/laahi Baadiyow.
Ergooyinka ayaa waxaa la geeyay goobaha loogu talagalay in la dejiyo, halkaasoo ay deganaan doonaan illaa iyo inta shirweynaha laga soo geba-gabeynayo.
Qaar kale oo Ergooyinka ka mid ah oo safar dhinaca dhulka ah ku tagey Magaalada Dhuusamareeb, ayaa sidoo kale waxaa la geeyay goobaha loo qorsheeyay inay deggaan.
Sabtidii maanta oo la fillaayay in shirweynuhu ka furmo Magaalada Dhuusamareeb ayuu markii labaad dib u dhac ku yimid, sababo ku aadan Ergooyinka oo aan soo wada gaarin Dhuusamareeb.